Ny fironana ho avy: fitambaran'ny telefaona feo sy fanilo ary trano hendry-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-11-12 HITS: 20
Amin'ny ho avy azo jerena, telefaona optique optika ous telefaona misy fanilo sy fanamafisam-peo ） Dia hampiditra fiasan-trano an-trano bebe kokoa, fampidirana fiarovana, fanaraha-maso ny fitaovana ao an-trano, serivisy fampahalalana ary fialamboly. Avy eo ny rafitra telefaona acousto-optika dia hiova fiovana. Samy hifangaro akaiky kokoa.
Tsy mitovy amin'ny rafitra fakan-tahaka madio, ny rafi-telefaona acousto-optika dia mampiasa fitaovana fanahafana mora vidy ao amin'ilay singa, ary ny tambazotran-damosina dia mampiasa ny protokol nomerika TCP / IP miorina amin'ny Ethernet ho an'ny tambajotra. Ny rafi-telefaona feo sy maivana dia iray amin'ireo fomba ara-toekarena sy ilaina indrindra hiatrehana ny tambajotranà vondron'olona marobe amin'izany fotoana izany.
Ny topolojia amin'ny tambajotran'ireo vondrom-piarahamonina marobe dia manana fahalalahana lehibe, ny fanitsiana ny tambajotra dia tena mety, ary ny vidiny dia mitombina, ny asa dia miorina ary ny fiarovana dia tsotra. Noho izany, ny rafitra telefaona feo sy hazavana dia novolavolaina haingana. Ny fomba tambajotram-pifandraisana an-tariby acousto-optika no vahaolana injeniera ara-toekarena sy azo ampiharina indrindra tamin'izany fotoana izany.
Amin'ny fotoana fohy, izy io no ho safidy voalohany indrindra amin'ny rafitry ny tambajotram-pifandraisana acousto-optic any amin'ireo vondrom-piarahamonina lehibe. Izy io dia misahana ny olan'ny fandefasana lavitra sy manahaka ny famerana ny fantsona tambajotra, ary mahazo ny vokatra audio sy video tsaratsara kokoa. Raha ampitahaina amin'ny rafitra nomerika madio sy ny fakana tahaka, ity fomba ity dia manana tombony lehibe amin'ny vidiny; ary ity firafitry ny tamba-jotra ity dia mety amin'ny fanitarana milamina, Milamina ny tambajotra.
Ningbo Joiwo Explosionproof dia miasa amin'ny telefaona tsy misy rano sy tsy misy hamandoana, telefaona tsy misy fipoahana, telefaona IP, rafitry ny fifandraisana IP indostrialy, telefaona fibre optika lalantsara ambanin'ny tany, telefaona fampielezana feo sy hazavana nanamafy, ary telefaona vonjy taitra ambanin'ny tany. , Telefaona finday vonjimaika vonjimaika telefaona, telefaona vonjy taitra ho an'ny toerana mahafinaritra any ivelany, telefaona manokana ho an'ny herin'ny rivotra any ivelany, telefaona serivisy manokana ho an'ny banky, telefaona tsy misy rano matevina ary orinasa misahana manokana amin'ny fampandrosoana, famolavolana, fanamboarana, fametrahana, debugging ary serivisy aorian'ny fivarotana ny rafi-pifandraisana ho an'ny tafika, ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fitaterana an-dalamby, lalantsara fantsona ambanin'ny tany, banky, fonja, tanàna azo antoka, orinasa indostrialy sy harena ankibon'ny tany ary sehatra hafa.